Quartz siramamy - Tahaka ny kristaly faran'izay siramamy tsara tarehy ny horonan-tsarimihetsika
Ny quartz siramamy dia vatosoa misy takelaka voajanahary toy ny kristaly siramamy mahafinaritra izay namboarin'ny fisian'ireo zavamaniry bitika kristaly.
Sugar quartz manana tantara miverina amin'ny taona 10,000, araka ny voalaza ao amin'ny Paleo-Indian.
Ny quartz siramamy dia tsy hita na hita be dia be hatramin'ny voalohany 1900. Ny zavatra hita amin'izao andro izao dia raisina ho tsy fahita firy.
Mineraly mafy sy maina ny quartz izay mandrafitra atody silika sy oksizenina. Ny atôma dia mifamatotra amin'ny rafi-pitohizan'ny SiO4 silikon-tetrahedra oksizenina, miaraka amin'ny oksizenina tsirairay nozaraina eo anelanelan'ny tetrahedra roa, ary manome endrika simika simika amin'ny SiO2. Ny quartz no mineraly faharoa be dia be indrindra ao amin'ny kaontinanta any amin'ny tany, ao ambadiky ny feldspar.
Misy karazany marobe karazana quartz, ary maro amin'izy ireo dia tombotsoa semi-sarobidy. Hatramin'ny fahagola, ny karazam-bonika no fitrandrahana betsaka indrindra amin'ny fanamboarana firavaka sy sary sokitra, indrindra any Eurasia.
Ny quartz dia an'ny rafitra kristaly trigonal. Ny endrika kristaly tsara indrindra dia prism iray sisiny enina mifarana amin'ny piramida enina mianadahy isaky ny faran'ny tsirairay. Amin'ny natiora, ny kristaly quartz matetika dia kambana, miaraka amin'ny kristaly kambana ankavanana sy havia havia, mifangaro, na miaraka miramirana amin'ny kristaly mifanila amam-boninkazo na mineraly hafa toy ny mampiseho ampahany fotsiny amin'ity endrika ity, na mba tsy hisian'ny tarehy kristaly tanteraka. miseho faobe. Ny kristaly voaorina tsara dia mivoaka amin'ny 'fandriana' izay mitombo tsy voafehy ho tsy misy; matetika ny kristaly dia miraikitra amin'ny tendrony iray amin'ny matotra ary iray ihany ny piramida fanafoanana. Na izany aza, ny kristaly efa natsangana indroa dia mitranga izay mivoatra malalaka tsy misy fametahana, ohatra ao anaty gypsum. Ny geode quartz dia toe-java-misy toy izany fa ny banga dia manodidina ny halehiben'ny endrika, nilahatra tamin'ny farafara kristaly manondro anatiny.
Na dia maro aza ireo anarana miovaova ara-tantara dia avy amin'ny lokon'ny mineraly, ny tetika ara-tsiansa momba ny anarana ara-tsiansa amin'izao fotoana izao dia miompana indrindra amin'ny mikrostrikan'ny mineraly. Ny loko dia fampahafantarana faharoa ho an'ny mineraly krômokrytalline, na dia mpamantatra ho an'ny karazany macrocrystalline aza izy.
Taratasy siramamy momba ny Fluorite avy eto Madagasikara
Hividy karajia voajanahary ao amin'ny fivarotana
Tags Loharano mafana, Quartz, synthetic